गर्भ किन खेर जान्छ ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय (Dr. Mamata Baral) – OM Hospital
गर्भ किन खेर जान्छ ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय (Dr. Mamata Baral)
हरेक विवाहित जोडीको आफू आमाबाबु भएको र आफूसँग स्वस्थ शिशु खेलेको हेर्ने रहर हुन्छ । तर, गर्भ तुहिने अथवा खेर जाने समस्याले धेरैको यो सपना तुहाउन सक्छ । अहिले नेपालमा १५ देखि २० प्रतिशत महिलाको गर्भ खेर जाने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । व्यक्तिको लापरवाही, विभिन्न रोग, शारीरिक अवस्था आदिका कारण गर्भ खेर जान सक्छ ।
सामान्यतया गर्भ रहेको २०औं हप्ताभन्दा अगाडि मिसक्यारेज अथवा गर्भ खेर जान सक्छ । पहिलो तीन महिनामा विभिन्न कारणले हरेक महिलाको गर्भ जाने सम्भावना रहन्छ । गर्भधारणको पहिलो चरण अर्थात् पहिलो २० दिनमा महिलाहरुलाई आफू गर्भवती भएको थाहा नै हुँदैन । यस समयमा महिलाहरु सजग नहुँदा गर्भ जाने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसैले गर्भ रहेनरहेको बारे महिलाहरु सजग हुनु जरुरी छ ।
गर्भ खेर जानुका कारण
पाठेघर सानो भएमा, पाठेघरको मुख खुकुलो भएमा र पाठेघरमा संक्रमण भएमा पनि गर्भ खेर जान्छ । कसैकसैलाई पतिको वीर्य नफाप्ने अथवा रज र वीर्यको प्रकृति नमिल्नाले पनि गर्भ खेर जान सक्छ । हाडनातामा गरिएको विवाह गर्भ खेर जानुको कारण हुन सक्छ । गर्भवती अवस्थामा धेरै काम गर्नु, गह्रुँगो भारी बोक्नु, जथाभावी यौन सम्पर्क राख्नु आदि पनि गर्भ जानुका कारण हुन् । तनावयुक्त जीवनशैली र विषादियुक्त खानाले पनि गर्भ खेर जान सक्छ । त्यस्तै, निरन्तर उभिरहनुपर्नेे काम गर्ने महिलाको पनि गर्भ खेर जान सक्छ । शरीर निष्क्रिय भएमा पनि गर्भ खेर जाने सम्भावना रहन्छ ।
गर्भ खेर जाँदा भेजाइनल डिस्चार्ज अर्थात् योनिबाट गाढा रातो रङको रगत आउन थाल्छ । यो धेरै दिनसम्म आइरहन सक्छ । तर कतिपय अवस्थामा गर्भ रहे पनि हल्का रक्तस्राव हुनु सामान्य नै मानिन्छ । तथापि, सुरक्षित गर्भावस्थाका लागि यस्ता लक्षण देखिएमा डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
गर्भाशयबाट सम्पूर्ण भ्रूण र सालनाल निस्किसकेको छ कि छैन भन्ने कुरामा यो निर्भर रहन्छ । रगतको परीक्षण गरी भ्रूण अथवा सालनाल गर्भमा रहेनरहेको बारे थाहा पाउन सकिन्छ । यदि महिलामा हार्मोनको कमी छ भने गर्भ खेर जान सक्छ । अल्ट्रा साउन्ड परीक्षण गरी हरेक अवस्थामा भ्रूण छ÷छैन भनी परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसबाट भ्रूणको मुटुमा ढुकढुकी छ कि अथवा भ्रूणको मृत्यु भइसकेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
२० देखि ३० वर्षको उमेरमा गर्भ धारण गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । त्योभन्दा अगाडि अथवा पछाडि गर्भ धारण भएमा गर्भ खेर जाने सम्भावना रहन्छ ।
गर्भ रहिसकेपछि २८ हप्तासम्म प्रत्येक महिना, २८ हप्तापछि दुईदुई हप्ता र ३६ हप्तापछि हरेक हप्ता गर्भको परीक्षण गर्नु आमा र गर्भमा रहेको शिशुको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ । त्यस्तै, गर्भ खेर जाने आशंका भएमा अन्य समयमा पनि परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।
डा.बराल काठमाडौंको चावहिलस्थित ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरकी वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ ।